Impompo yokuLawula amandla
Amandla Thatha Off
I-NITOYO yayidla ngokuba liqela elincinci labantu aba-5 ngo-2000, eliseChengdu, eSichuan.Emva kweenzame zethu, ngoku sele iphuhliswe ibe yindawo enye yenkonzo yemoto yokumisa abantu abangaphezu kwe-60, isebenzisana namazwe / imimandla ye-180 kwaye yakhonza ngaphezu kwabathengi be-400.
Ukusukela ngo-2000 ~
Ngo-2000, iqela lethu labasekayo laqala ishishini lokuthumela ngaphandle iinxalenye zemoto ngotyelelo oluninzi kunye nophando phantse kuzo zonke iifektri zaseTshayina, laze lafumana iifektri ezifanelekileyo.
2000-2005 Ukwandiswa kuwo wonke uMzantsi Melika
Emva kwemizamo emininzi kunye notshintsho sikwazile ukufumana intembeko yabathengi kwimarike yaseMzantsi Melika ngakumbi eParaguay.
Ngo-2000-2010 Ukuzalwa Kweempawu Zethu I-NITOYO&UBZ
Ngemizamo yeminyaka eli-10 saziwa njenge-NITOYO & UBZ kwihlabathi liphela, abathengi abaninzi bayawuthemba umgangatho we-NITOYO kunye nenkonzo.Ngaphezu koko, njenge logo yethu ibonisa, sizimisele ukubonelela ngeemveliso ezintle ukukhusela ukuqhuba kwakho.Ngokusekelwe koku, sinee-arhente kumazwe amaninzi ngokomzekelo eParaguay, eMadagascar.
Uphuhliso luka-2011 oluDidiversified
Ngophuhliso lwe-intanethi, siqala ukwandisa iqonga kwi-intanethi kubandakanya ivenkile yesikhululo samazwe ngamazwe sase-Alibaba kunye newebhusayithi yethu esemthethweni https://nitoyoauto.com/, facebook, linked-in, youtube.
2012-2019 Uhlumo lwamazwe ngamazwe
Ngenxa yendlela ebesisakha ngayo ngaphambili, ngokuthe ngcembe sandisa iimarike ezingakumbi kwaye zithandwa e-Afrika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma, nakuMzantsi-mpuma Asia.
Ngo-2013 siye samkelwa ngempumelelo yimarike yaseAfrika kwaye safumana iiodolo ezixabisa i-1,000,000 USD.
Ngo-2015 siye sakuvuyela ukuba ngumntu othenjiweyo ngabahlobo abaninzi abakuMzantsi-mpuma Asia.
Ngo-2017 siye eLatin Expo kunye neMelika Aapex phakathi kukaJulayi noNovemba.Kulo nyaka sifumana isidima sethu kwezi marike zimbini njengoko iiodolo zethu–1,500,000 USD zibonakalisile.
Ngo-2018-2019 siye saya kwimiboniso emininzi nangaphezulu, ithunyelwe kumazwe angaphezu kwe-150.
Ngo-2021 uNITOYO Ugqiba iminyaka engama-21
Amathuba okukhula kweli qela mahle kakhulu.Ukusukela ngo-2000, siye sagcina injongo yethu yokuqala: ukuqinisekisa ukuba abathengi banokuthenga ngokuzithemba kwaye abathengi banokusebenzisa ngokuzithemba!
Ngemibuzo malunga neeMveliso zethu okanye uluhlu lwamaxabiso, Nceda ushiye i-imeyile yakho kuthi kwaye siyakunxibelelana kwiiyure ezingama-24.